Posted by Rob Y. ngo-May 1, 2014 · Shiya amazwana
In post wethu odlule sasiyihlanganisa amafutha crank icala engine, indlela ukuhlola nokuthi yini ukubheka for. In this post sizobe Cover kokuhlola transmission uketshezi yini ukubheka for.
Eceleni amafutha engine, amafutha yokudlulisela cishe olandelayo uketshezi ebaluleke kakhulu. Kubalulekile ukuze omoya othomathikhi ukuba ezingeni efanele ukuze ukusebenza ngendlela efanele futhi babe shift yokudlulisela kahle futhi ukuqinisekisa impilo ende.
Into yokuqala thina ukwenze nje ukuya phambili futhi uhlole izinga ewuketshezi yokudlulisela. Thola induku cwilisa futhi zidonsa it out ngaphandle ukusebenza imoto. Ngezinye izikhathi kukhona imiyalelo stick idiphu kanjani ukuhlola uketshezi. Futhi bheka manual abanikazi uma unalo kuyatholakala, imiyalelo kufanele akhiwe ngaphansi eziwuketshezi. Abenzi Iningi zikhomba ukuthi imoto kumele ibe nemfudumalo, injini egijima futhi hlangothi. Sula off the dipstick kabusha uyifaka futhi zidonsa it out aphinde futhi uhlole ukuthi uketshezi in the imikhawulo Kunconywa. Futhi iphunga uketshezi, akufanele abe nephunga wokushiswa. Omoya Iningi kufanele abe Tint obomvu kubo futhi hhayi ngokuphelele black (lokhu incike okusezingeni kanjani mileage ivuliwe imoto).
With ezinye izimoto newer, ukudluliselwa uphiko ngokuphelele uphawu, okusho ukuthi awukwazi ukwengeza noma ngisho uhlole uketshezi. Ngala izimoto nezimoto ukuthi ungakwazi ukuhlola ngokufanayo, sincoma ukuthi uya phambili bese ushayela imoto. Uma imoto kubanda, ngenkathi ushayela, uphawule uma imoto ukuguquguquka kahle. Sithanda ukwenza lokhu ngezindlela ezimbili. One, kusukela stop ephelele, enikeza kahle kube mpintsha more njengoba nezimo evamile ukushayela. Second, kusukela stop ephelele ukuthatha off nzima futhi ngokushesha. The rpms ngokuvamile go kancane ephakeme phambi amashifu injini lapho uvivinya ngale ndlela. Ungase Uma une umnikazi wemoto imoto bafuna ubatshele yini eniyenzayo ngaphambi isandla ngakho ngeke abe yisifo senhliziyo futhi ucabanga ukuthi uzama likhiphe up imoto yabo. Uma yokudlulisela kubanda ungomunye isikhathi lapho uyokwenza up and not bayeke kahle. Hlola ukubona uma rpms (engine linemibhikisho ngomzuzu) usushiywe okusezingeni kanti injini isebenza kanzima ngaphambi amashifu yokudlulisela. Futhi uma imoto kuhle futhi afudumele, Mqaphele aphinde kanjani imoto ukuguquguquka.
Ukushintsha yokudlulisela uketshezi akuyona into kwenziwa njalo kwenziwe like ekushintsheni amafutha engine. Nokho, kufanele ishintshwe ngokusho izincomo abakhiqizi. Lolu lwazi kufanele lifakwe manual abanikazi, futhi ngethemba nomthengisi has elilodwa. Singabantu abalandeli hhayi enkulu izinhlelo ukuthi ukushintsha uketshezi yokudlulisela ngokuthatha it out by the tube nisuthe. Abanye izindawo amafutha ushintsho ukwenza lokhu, futhi sibonile lapho Esetshilo lokhu kwenziwe ngesikhathi imoto ine 100,000 miles kuso akwenzile kungalimaza kakhulu kunokuba kusize. Ngemva kwalesi kwenziwe imoto ngeke bayeke kahle. Ubuze umnikazi Njalo uma kuye kwadingeka ukuwudlulisa izidingo kanye kwathiwa izidingo kanjani futhi kuphi. Sincoma uma ketshezi ishintshwe ukuya phambili bese uphonsa pan ukuwudlulisa ushintsha lemifanekiso.
Okokugcina, wena njalo ufuna ukuthatha imoto ukuthi ucabangela ukuthenga ukuba umakhenikha eqinisekisiwe ayinike once ngaphambi kokuthenga. Kufanele futhi uthole imoto umbiko isimo ukubona uma imoto has Amarekhodi atholakalayo kumthengisi. Uma izimoto izidingo at nomthengisi ngokuvamile ubikele isimo imoto izinkampani ezinkulu umbiko futhi kusiza ukugcina irekhodi lazo zonke izinkonzo aqoshiwe kwenziwe ukuze imoto.